ZTE wuxuu si rasmi ah u soo bandhigayaa Cusub, Jaban Blade V8 Mini iyo Lite oo laga helay MWC 2017 | Androidsis
ZTE wuxuu si rasmi ah u soo bandhigayaa Cusub, Jaban Blade V8 Mini iyo Lite oo laga helay MWC 2017
ZTE wuxuu ku bilaabay 2017 aad "mashquul" casriyadiisa casriga ah taxanaha Blade. Intii lagu guda jiray CES-dii ugu dambeysay ee Las Vegas lagu qabtay, sida sanad walba, bilowga bisha Janaayo, ZTE waxay soo bandhigtay casriga cusub ee Blade V8 Pro, aalad in kasta oo ay "pro" magaceedu tahay mid aan qaali ahayn, oo ay ku jiraan laba 13 kamaradood oo megapixel ah Waxay ahayd laba maalmood oo keliya dhacdadaas ka dib markii shirkaddu ku dhawaaqday Blade V8 (iyada oo aan lahayn magaca magaca Pro), oo wali bixiya noocyo kala duwan oo dhexdhexaad ah.
Hadda, qaab dhismeedka Mobile World Congress 2017 ee Barcelona ka dhigaya caasimadda adduunka ee tiknoolajiyada moobiilka, ZTE ayaa si rasmi ah u shaacisay laba taleefan oo cusub, xitaa ka jaban, iyo taasi waxay la timid heerka Android 7.0 Nougat. Waa wax walba oo ku saabsan taleefannada casriga ah Blade V8 Mini iyo Blade V8 Lite waxaa qoray ZTE.
1 ZTE waxay ku sharraxeysaa tayada qiimaha ku jira taxanaha Blade
ZTE waxay ku sharraxeysaa tayada qiimaha ku jira taxanaha Blade
Waxaa ka mid ah labada aaladood ee mobilada cusub ee ay soo bandhigtay shirkadda 'ZTE' ee World World Congress 2017, aaladda dhamaadka sare u dhigma doonta tan ZTE Blade V8 Mini, taas oo ah sida saxda ah waxaad ku arki karto sawirka madaxa ee muujiya qoraalkan.
Sida aan aragno, xarunta cusub waxay bixisaa a naqshadaynta unibody biraha, in kastoo ay u badan tahay in muuqaalka ugu caansan ee V8 Mini uu yahay inay bixiso a 13 iyo 2MP laba kamarad ah siday u kala horreeyaan dhabarka. Kaamirooyinkaani sidoo kale waxay taageeraan a 3D toogashada, taas oo u oggolaan doonta dareemayaasha inay sawirro ka qaadaan dhinacyo kala duwan oo ay isku daraan si ay u abuuraan sawirro 3D ah. Intaas waxaa sii dheer, qalabka ayaa sidoo kale la socda xakamaynta kamaradda gacanta iyo otomaatiga HDR.
ZTE V8 Mini wuxuu leeyahay a 5.0 inch screen, processor Qualcomm Snapdragon 435, 2GB oo RAM ah, 16GB kaydinta isku dhafan, xasuusta la ballaarin karo oo ay ugu mahadcelineyso booska kaarka micro SD-ka, a 5MP kamarad hore iyo a 2.800mAh baytariga aan laga saari karin.
Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay aaladda akhriska ee farta dambe ee terminalka, taas oo u oggolaan doonta isticmaaleha inuu bilaabo codsigiisa uu jecel yahay marka shaashadda la xiro ama la xiro.
Nidaamka qalliinka, sida kor ku xusan, ZTE V8 Mini wuxuu u imaan doonaa iibsadayaasha leh Android 7.0 Nougat sida caadiga ah iyo lakabka u-habeynta nooca MiFavor 4.2.
Shirkadda ZTE ayaa soo bandhigi doonta casriga casriga ah ee V8 Mini marka hore suuqyo kala duwan oo ku yaal gobolka Aasiya iyo Baasifiga iyo Yurub, laakiin faahfaahinta ku saabsan qiimaheeda iyo taariikhda saxda ah ee la heli karo wali lama shaacin.
Laakiin tani maahan aaladda kaliya ee shirkadda ZTE ay maanta ku soo bandhigtay Mobile World Congress 2017. Sidii aan filaynay bilowgii, shirkaddu sidoo kale waxay si rasmi ah adduunka ugu shaacisay ZTE Blade V8 Lite oo aad ku arki karto adiga oo ka sarreeya khadadka.
Taleefankan casriga ah ee cusub ayaa lagu soo bandhigay jidh gebi ahaanba ka samaysan bir iyo shaashad weyn oo cabbirkeedu yahay 5.0 inches. Gudaha waxaa ku jira processor-ka Octa-core MediaTek 6750 Iyo, sida ZTE Blade V8 Mini, waxay sidoo kale la timid heer Android 7.0 Nougat sida nidaamka hawlgalka "ka kooban" by version 4.2 ee MiFavor, ZTE ee lakabka Customization u gaar ah.
Intaa waxaa dheer, waxay bixisaa a 8MP kamaradda weyn iyo kamaradda hore ee 5MPsidoo kale a akhristaha faraha kaas oo sidoo kale lagu dhejiyay gadaashiisa.
Blade V8 Lite waxaa loo soo bandhigi doonaa macaamiisha Talyaaniga, Jarmalka iyo Isbaanishka on hirkeedii ugu horeysay bilaabay. Mar dambe, helitaankeeda waxaa loo fidin doonaa suuqyo badan oo ku yaal gobollada Aasiya-Baasifigga iyo gobollada Yurub.
Sidoo kale kiiskan shirkaddu ma aysan shaacinin qiimaha Blade V8 Lite ama taariikhda ay sida gaarka ah u bilaabi doonto suuqyada lagu dhawaaqay, laakiin waxaan kugula socodsiin doonaa Androidsis isla marka aan ogaano.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » ZTE » ZTE wuxuu si rasmi ah u soo bandhigayaa Cusub, Jaban Blade V8 Mini iyo Lite oo laga helay MWC 2017
Dahabka kale ee Nokia ee MWC2017: Nokia 5 iyo Nokia 6
Fiidiyowga xaday ee Samsung ee soo socda ee Galaxy S8